Daawo: Guddoomiye xaadoole oo maanta si rasmi ah xilka ula wareegay kadib munaasabad ka dhacday…. – Kismaayo24 News Agency
Daawo: Guddoomiye xaadoole oo maanta si rasmi ah xilka ula wareegay kadib munaasabad ka dhacday….
by Tifaftiraha K24 10th May 2017 017
Magaalada balcad waxaa maanta ka dhacay munaasabad balaaran oo xil wareejin ah taasi oo ay xilalka kula kala wareegayeen guddoomiyaha cusub ee dagmada balcad iyo guddoomiyihii hore .
Wareegto ka soo baxday xafiiska Madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle ayaa loogu magacaabay Cismaan Maxamed Xaadoole guddoomiyaha degmada Balcad ee gobolka Sh/dhexe waxaana xilkaasi laga qaaday Maxamed Maxamuud Saney oo hayay xilkan illaa iyo sanadkii 2014.
Munaasabad balaaran oo xil wareejin ah ayaana maanta ka dhacday dagmada balcad taasi oo ay ka soo qeyb galeen mas’uuliyiinta gobolka kan dagmada,waxgarad ,ururada bulshada rayidka iyo marti sharaf kale oo lagu casuumay munaasabadda.
Guddoomiyihii hore ee dagmada balcad Maxamed Maxamuud Saney oo hadal kooban ka jeediyay munaasabadda xil wareejinta ayaa sheegay in maamulkiisa mudadii uu xilkaan haayay ay waxbadan u qabsoomeen wuxuuna uga mahad celiyay dhamaan dadkii kala shaqeeyay shaqada qaranka ee loo igmaday isagoona kula dar daarmay maamulka cusub in howsha halkeeda uu ka sii wado.
Guddoomiyaha cusub ee dagmada balcad mudane Cismaan Maxamed Xaadoole oo horay xilkaan usoo qabtay ayaa balan qaaday in hormar la taaban karo uu gaadhsiin doono dagmada balcad oo ah dagmo aad iyo aad istaraatiiji u ah sidoo kalana ah dagmo qadiimi ah .
Xafaladaan ayaa waxey noqoneysaa tii ugu horeeyeysay ee ka dhacdaa degmada Balcad tan iyo dowladdii kacaanka aheyd waxaana xafladda xil wareejinta ay kusoo dhamaatay jawi nabdoon.
Daawo: Magaalada kismaayo oo laga bilaabay ol’ole ay soo dhaweeyeen dhamaan shacabka magaalada ku nool
War hada: Dowladda Ingariiska oo Soomalia uga farxisay balan qaad cajiib ah ka hor shirka maanta furmi doona
Dhagayo+Sawiro:- Madaxweyne ku Xigeenka Puntland oo Booqday Xarunta Wasaarada Waxbarashadda ee Puntland
War Cusub: Xasan shiikh maxamuud muxuu ka yiri dilkii xalay loo geestay wasiirkii howlaha guud iyo dib u dhiska cabaas siraaji??
Xog: Madaxtooyada oo shirka dhuusamareeb u dirtay $60,000 (lixdan kun)